I-ZTE Axon 10 Pro 5G iphakamisa iitshathi ze-AnTuTu enkosi ekugcineni ngokukhawuleza | I-Androidsis
I-ZTE Axon 10 Pro 5G iphakamisa iitshathi ze-AnTuTu ngenxa yokugcina ngokukhawuleza
Ukhuphiswano lwe-smartphone eqhuba kakuhle luyingozi, kwaye sinokuba neentshatsheli ezintsha kungekudala, ezinokuthi zibe ngu-el I-ZTE Axon 10 Pro 5GKutshanje, kubekwe amanqaku kwi-AnTuTu.
Iflegi yeZTE iphakathi kweefowuni ezininzi ezine Snapdragon 855, kodwa umdla ngokwaneleyo, ayisiyiyo i-chipset eqinisekisile uloyiso, kodwa ukugcinwa. Masiqwalasele ngakumbi isizathu soku!
I-AnTuTu ikuxelile oko I-Axon 10 Pro 5G yifowuni yokuqala yokudibanisa i-chipset ye-S855 kunye nenkqubo yefayile yeF2FS. Oku kuphuhliswe yi-Samsung ngokukodwa ukuba isetyenziswe ngokugcina i-flash, eyenza ukuba ikhawuleze kunenkqubo ye "ext4", esetyenziswa ziifowuni ezininzi ze-Android kwaye yayenzelwe i-HDD.
I-Axon 10 Pro 5G inqanaba lokuqala kubulela kugcino lwayo olukhawulezayo
Ngesizathu esithile, i-Samsung incamathele kwinkqubo ye "ext4" yefayile ye- Uthotho lweGPS S10. I Pixel 3 isebenzisa i-F2FS, kodwa yile fowuni isisiseko ye-Snapdragon 845. Nokuba kunjalo, indlela ye- I-Axon 10 Pro 5G yenze ngcono i-50% kwinxalenye yokugcina yebhentshi kunezinye iifowuni ze-SD855. Nangona kunjalo, yayingelilo nje inkqubo yefayile.
Ifowuni isebenzisa iichips zeSandisk iNAND 8521 nge-3-layer 64D NAND technology, Inomsebenzi ophuculweyo wokubhala ngokungacwangciswanga kunye nokulandelelana. Banokufikelela kwi-500MB / s ngexesha lokubhala ngokulandelelana, ngelixa isantya esiqhelekileyo esilinganiswe yi-AnTuTu kule klasi yefowuni ingama-200-250MB / s.
I-Axon 10 Pro 5G isondele kakhulu ekukhupheni iichips, ukufikelela kuma-792 MB / s kunye nama-486 MB / s ngokulandelelana kokufunda nokubhala, ngokulandelelana, kunye ne-5,314 IOPS kunye ne-2,527 IOS ngokungahleliwe kufundwa kwaye kubhala.
Iichips ezintsha kunye nenkqubo yefayile ethi isixhobo siyisebenzise yona ikhokelela kwisantya sokubhala kunye nokusebenza okungacwangciswanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-ZTE Axon 10 Pro 5G iphakamisa iitshathi ze-AnTuTu ngenxa yokugcina ngokukhawuleza
Uyiseta njani kwakhona ifowuni yakho yeHuawei
Zonke ezi zithuthi zeVivo ziya kufumana i-beta kawonkewonke yeFuntouch OS 9 ngoJulayi